Shil Gaari oo ay Dad Ku Dhinteen oo Saaka ka Dhacay Wadada u Dhaxaysa Hargeysa iyo Berbera – Goobjoog News
Afar qof ayaa ku dhintay Saddex kalena way u dhaawacmeen shil baabuur oo gaari noociisu NOHA yahay oo rakaab ahaa uu ku galay deegaanka Abdaal ee u dhexeeya Berbera iyo Hargeysa .
Shilkan oo saaka aroornimadii hore dhacay ayaa ka dhashay ka dib markii baabuurka NOHA-da ahi ay isku dhaceen baabuur kale oo xamuul ah oo ku rarnaa cawska xoolahu daaqaan, isku dhacan laba gaari ayaa sababay in baabuurkii NOHADA ahaa uu ka baxay wadadii laamiga ahayd dhibaatana ay halkaa kasoo gaarto dadkii gaariga saarnaa, iyadoo baabuurkani oo ka tagay magaalada Hareysa uu ku socday magaalada Berbera.
Dhammaan dadka dhibaatadu ka soo gaartay shilka waxay ahaayeen dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa gaariga Nohada ah .
Todobadan ruux ee waxyeeladu ay soo gaartay oo darawalkiina ku jiro ayaan wali aan la kala saarin inta rag iyo dumar ay kala ahaayeen waxaana dadkaasi dhammaantood loo gudbiymey cisbitaalka guud ee magaalada Berbera.
Jidka isku xira Hargeysa iyo Berbera; ayaa ah kan ugu badan ee shilal noocan oo kale ah ka dhacaan, waxaana loo aaneeyaa jidka oo aan wanaagsanayn isla markaana ciriiri ah oo aan ku fillayn in baabuurtu si waafi ah isku dhaafto.
Diyaarad Sidday Raashiin Dhacay Oo Lagu Qabtay Garoonk Aadan Cadde Ee Muqdisho (Sawirro)
Booliiska Baladweyne Oo Dad u Xiray Dil Habeen Kahor Ka Dhacay Magaaladaasi
Gudoomiye Jawaari “Ma yeelayo umana dulqaadanayo buuq, wareer iyo is hortaag shaqada Baarlamaanka” (Dhageyso)
Frijgj ljddyb Buy cheap viagra online us how much does cialis cost
Qhosyy cisaum viagra 50mg cialis from canada
custom plastic candy boxes
Get custom retail packaging boxes...
best cbd vape oil for anxiety is cbd oil legal in georgia me...